देवः विकास बैंक र युनियन फाइनान्सको एकै दिन विशेष साधारण सभा, के–के छन् एजेन्डा ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » देवः विकास बैंक र युनियन फाइनान्सको एकै दिन विशेष साधारण सभा, के–के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौं - देवः विकास बैंक र युनियन फाइनान्सले असार २९ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । विशेष साधारण सभामा देवः विकास बैंकले युनियन फाइनान्सलाई एक्वायर गर्न स्वीकृति दिने विशेष प्रस्ताव लगिँदैछ । यी दुवै संस्थाले एक्विजिसन सम्बन्धी भएका सम्झौता र सहमति पत्रलाई साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसैगरी, साधारण सभामा युनियनको १ कित्ता सेयर बराबर देवःको ०.५ कित्ता सेयर हुनेगरी सेयर स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । देवः ले एक्विजिसन प्रकृयामा रहेका संस्थालाई एक्वायर गरिसकेपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीमा ४०% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि साधारण सभामा लैजाँदैछ ।
देवः को विशेष साधारण सभा लैनचौर बैङ्क्वेट लैनचौर र युनियनको नक्साल बैङ्क्वेट नक्साल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । विशेष साधारण सभा गर्न देवःले असार २३ देखि २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । युनियनको भने एक्विजिसन प्रकृयाका कारण गत चैत १० गतेदेखि सेयर कारोबार बन्द छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन देवः विकास बैंकले यसअघि सहारा विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद नाफा १९ करोड ९० लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ १९ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२५ रुपैयाँ २६ पैसा छ ।